Ku iibso Bitcoin Kaydka oonleenka ah Revolut | Paxful
Ku iibso Bitcoin (BTC) lacagta Revolut
Sida Bitcoin loogu iibsado Revolut
Revolut waxaa adeegsada in ka badan 2 milyan oo macmiil waxayna bixisaa adeego balaaran oo kuwa baanka ah, ayna ku jiraan lacag dirista caalamiga ah iyo lacagaha tooska la iskugu diro. Hadda, waxaad u adeegsan kartaa Revolut inaad Bitcoin uga iibsato Paxful adoon wax qarash dheeraad ah bixin. Halkaan ayaad ka helaysaa qaabka:
Waxa koobaad ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad gasho koontadaada Paxful ama furato mid cusub adoo gujinaaya Furo Ciwaan. Kadib markaad dhamayso hanaanka xaqiijinta koontada, guji Iibso Bitcoin ka dhig Revolutqaabka aad jeceshahay inaad lacagta ku bixiso si aad u aragto yaboohyada ku quseeya. Yaboohyada ugu fiican ayaa ka yimaada iibiyaasha sumcada leh hal qaab ood ku helaysana waa inaad gashaa bogooda aadna qaadato kan loogu amaanta badan yahay. Si fudud u guji magaca iibiyaha si aad u aragto taariikhda ganacsiga aadna u akhrido cabiradiisa ganacsiga.
Marka aad hesho yabooha aad rabto oo ka yimid ibiye sumcad leh, guji Iibso si aad u aragto shuruudaha ganacsigiisa. Akhri shuruudaha ganacsiga si taxadar leh oo siday yihiin u raac. Guji baoonka "Aqbal Shuruudaha oo hadda Iibso Bitcoin!" haddii aad u bogtay shuruudaha yabooha. Godka wada sheekaysiga tooska ah ayaa soo baxaaya adoo halkaas kala hadli kara iibiyaha waydiina kara haddii ay jiraan shuruudo kale.
Ogoow in Paxful ay adeegsato nidaam dhex-dhexaadin ah si ay u xirto BTC ga iibiyaha marka ganacsiga la bilaabo - si ay lacagtaadu u badbaado.
Markaad lacagta u dirto koontada Revolut ee iibiyaha, guji U astee Mid la Bixiyay si iibiyuhu BTC ga uga fasaxo kaydka. Waa intaas! Waxaad si guul leh Bitcoin ugu iibsatay adoo adeegsanaaya koontadaada Revolut.